August 2016 - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Windows 8.1 -Ultimate [64-bit & 32bit] 9.56MB
Windows 8.1 ချစ်သူများအတွက် ဒေါင်းရလွယ်ကူအောင် [3.49GB] ရှိတဲ့ Windows 8.1 -Ultimate [64-bit & 32bit] အတွက် 9.56MB ပြုလုပ်ပြီ ...
Windows 8.1 -Ultimate [64-bit & 32bit] 9.56MB Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 6:57 PM Rating:5Windows 8.1 ချစ်သူများအတွက် ဒေါင်းရလွယ်ကူအောင် [3.49GB] ရှိတဲ့ Windows 8.1 -Ultimate [64-bit & 32bit] အတွက် 9.56MB ပြုလုပ်ပြီ ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 6:57 PM No comments:
Xiaomi Devices အတွက် Recovery တင်ခြင်း၊ Root ဖေါက်ခြင်း၊ ROM တင်ခြင်း ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်တဲ့ [All In One Tool]
Xiaomi Devices အတွက် Recovery တင်ခြင်း၊ Root ဖေါက်ခြင်း၊ ROM တင်ခြင်း ဘက်စုံ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ [All In One Tool] လေးကို လိုအပ်နေသူမျာ...
Xiaomi Devices အတွက် Recovery တင်ခြင်း၊ Root ဖေါက်ခြင်း၊ ROM တင်ခြင်း ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်တဲ့ [All In One Tool] Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 10:43 AM Rating:5Xiaomi Devices အတွက် Recovery တင်ခြင်း၊ Root ဖေါက်ခြင်း၊ ROM တင်ခြင်း ဘက်စုံ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ [All In One Tool] လေးကို လိုအပ်နေသူမျာ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 10:43 AM No comments:
CWM & TWRP ထည့်နည်း
Android Devices အတွက်ဘက်စုံ အသုံးပြုနိုင်သော [All In One - Smart Flasher Toolsl]
Android Devices အတွက်ဘက်စုံ အသုံးပြုနိုင်သော [All In One - Smart Flasher Toolsl] ကောင်းလည်း တစ်ခုကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ.. အကုန်ပြါ...
Android Devices အတွက်ဘက်စုံ အသုံးပြုနိုင်သော [All In One - Smart Flasher Toolsl] Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 10:40 AM Rating:5Android Devices အတွက်ဘက်စုံ အသုံးပြုနိုင်သော [All In One - Smart Flasher Toolsl] ကောင်းလည်း တစ်ခုကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ.. အကုန်ပြါ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 10:40 AM No comments:
Nova N8 Display Fix 100%
Nova N8 Firmware တင်မရတဲ့အခါ Firmware တင်ပြီး အဆင်မပြေတဲ့ အခါမျိုးမှာ Error Fix ဖြစ်ပြီ Display ဖြူဖွေးပြီ LCD အစင်းထခြင်းတွေ ဖြစ်ခ...
Nova N8 Display Fix 100% Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 10:37 AM Rating:5Nova N8 Firmware တင်မရတဲ့အခါ Firmware တင်ပြီး အဆင်မပြေတဲ့ အခါမျိုးမှာ Error Fix ဖြစ်ပြီ Display ဖြူဖွေးပြီ LCD အစင်းထခြင်းတွေ ဖြစ်ခ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 10:37 AM No comments:
Samsung USB Drivers Latest All Version တွေကို ဒေါင်းလော့ရယူရန်
Samsung All Devices တွေအတွက် USB Drivers တွေကို Version အလိုက် ပြန်လည်ဒေါင်းရလွယ်ကူအောင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ.. အထွေအထူးတော့ ပြေ...
Samsung USB Drivers Latest All Version တွေကို ဒေါင်းလော့ရယူရန် Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 10:33 AM Rating:5Samsung All Devices တွေအတွက် USB Drivers တွေကို Version အလိုက် ပြန်လည်ဒေါင်းရလွယ်ကူအောင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ.. အထွေအထူးတော့ ပြေ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 10:33 AM No comments:
1. Torn 2. Ode 3. My Own Prison 4. Pity foraDime 5. ln America 6. lIIusion 7. Unforgiven 8. Sister 9. What's This Life for...
Creed - My Own Prison Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 12:25 AM Rating:51. Torn 2. Ode 3. My Own Prison 4. Pity foraDime 5. ln America 6. lIIusion 7. Unforgiven 8. Sister 9. What's This Life for...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 12:25 AM No comments:
မဟောင်းသေးတဲ့ ကိုအယ်နောင်းသီချင်းများစုစည်းမှု အတွဲခွေများမှ စုစည်းမှုဖြစ်သည် Our Family (အယ်နောင်း + Group) http://pc.cd/O8NctalK ...
မဟောင်းသေးတဲ့ ကိုအယ်နောင်းသီချင်းများစုစည်းမှု Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 12:13 AM Rating:5မဟောင်းသေးတဲ့ ကိုအယ်နောင်းသီချင်းများစုစည်းမှု အတွဲခွေများမှ စုစည်းမှုဖြစ်သည် Our Family (အယ်နောင်း + Group) http://pc.cd/O8NctalK ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 12:13 AM No comments:
Breeze of Midnight သန်းခေါင်ယံလေညင်း B.O.M မှာ vocal က သော်တာချမ်းမြေ့ဖြစ်ပြီး ရွှေထွဋ်က guitar, Bass က ဘတ်တာ၊ ဇေယျာမင်းက KB ဖြစ်ပြ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 11:30 PM No comments:
Adult, Drama, Fantasy , History, Semi, 18+ ဇာတ်ကားအမျိုးစားလေးပါ။ ဂျပန်ဒရမ်မာဇာတ်ကားကောင်းကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ၁၈+ နဲ့တင်ဆက်ေ...
Bitter Honey (2016)18+HD720p ရုပ်သံ/အကြည် Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:59 PM Rating:5Adult, Drama, Fantasy , History, Semi, 18+ ဇာတ်ကားအမျိုးစားလေးပါ။ ဂျပန်ဒရမ်မာဇာတ်ကားကောင်းကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ၁၈+ နဲ့တင်ဆက်ေ...
ReviverSoft PC Reviver v2 Crack Full အသုံးပြုလို သူများအတွက် နောက်ဆုံးဗားရှင်းအသစ် Update ရလာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။မိမိတို့ Pc ထဲက ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:06 PM No comments:
PowerDirector Video Editor Pro v3.13.0.Apk
PowerDirector Video Editor Pro အသုံးပြုလိုသူများအတွက် ၈ လပိုင်း နောက်ဆုံးထွက် Update အသစ်လေးရလာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိတို့ စမတ...
PowerDirector Video Editor Pro v3.13.0.Apk Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 5:55 PM Rating:5PowerDirector Video Editor Pro အသုံးပြုလိုသူများအတွက် ၈ လပိုင်း နောက်ဆုံးထွက် Update အသစ်လေးရလာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိတို့ စမတ...
Wise Care 365 PRO v4.25 Keygen Full+188 Kb (နောက်ဆုံးဗားရှင်း)
Wise Care 365 PRO v4.25 Keygen Full အသုံးပြုလို သူများအတွက် နောက်ဆုံးဗားရှင်းအသစ် Update ရလာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ PC ...
Wise Care 365 PRO v4.25 Keygen Full+188 Kb (နောက်ဆုံးဗားရှင်း) Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 11:34 AM Rating:5Wise Care 365 PRO v4.25 Keygen Full အသုံးပြုလို သူများအတွက် နောက်ဆုံးဗားရှင်းအသစ် Update ရလာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ PC ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 11:34 AM No comments:
PC Cleaner Pro v14.0.16.8.26 Full+5.5 Mb (2016 )
အခြား လုံခြုံရေး products ကဲ့သို့ မိမိတို့၏ PC ကွန်ပျူတာ နှေး ခြင်းမရှိစေဘဲ မြန်ဆန်သွတ်လက်မှုကို ကောင်းမွန်စေမှာပါ antivirus နှင့် an...
PC Cleaner Pro v14.0.16.8.26 Full+5.5 Mb (2016 ) Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 12:32 AM Rating:5အခြား လုံခြုံရေး products ကဲ့သို့ မိမိတို့၏ PC ကွန်ပျူတာ နှေး ခြင်းမရှိစေဘဲ မြန်ဆန်သွတ်လက်မှုကို ကောင်းမွန်စေမှာပါ antivirus နှင့် an...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 12:32 AM No comments:
i-mobile IQ 1.3 DTV Flash Tools & Firmware
i-mobile IQ 1.3 DTV Flash Tools & Firmware လေးပါ။ လိုအပ်လို့ တောင်းထားကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ကျနော် အသုံးပြုနေတဲ့ i-mobile I...
i-mobile IQ 1.3 DTV Flash Tools & Firmware Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 11:04 PM Rating:5i-mobile IQ 1.3 DTV Flash Tools & Firmware လေးပါ။ လိုအပ်လို့ တောင်းထားကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ကျနော် အသုံးပြုနေတဲ့ i-mobile I...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 11:04 PM No comments:
M-Horse X9 Flash Tools & Firmware
မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် တောင်းထားလို့ M-Horse X9 Flash Tools & Firmware တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခြားသော လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်း...
M-Horse X9 Flash Tools & Firmware Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 11:02 PM Rating:5မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် တောင်းထားလို့ M-Horse X9 Flash Tools & Firmware တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခြားသော လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်း...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 11:02 PM4comments: